Thriller – Categories – Channel Myanmar
Remember You (2021) Remember You မြန်မာနာမည် ကိုနေလင်းလို့သိကြတဲ့ GMM က ထိုင်းမင်းသားချောလေး Tay Tawan ရဲ့ အသစ်စက်စက် ဇာတ်လမ်းတွဲအသစ်လေးဖြစ်ပြီး၂၀၁၅ခုနှစ်က နာမည်ကြီးအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ "Hello Monster" ကိုရီးယားဒရမ်မာကို ပြန်လည်ရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဇာတ်လမ်းအကျဥ်းကတော့လူတစ်ယောက်ရဲ့ရုပ်ကိုမြင်တာနဲ့ လူကောင်းလား လူဆိုးလားခွဲခြားသိမြင်နိုင်တဲ့ ထက်မြက်တဲ့ စုံထောက် ထန်ဝ(Petch Paopetch Charoensook)...ကလေးဘဝမှာ ဖခင်ဖြစ်သူ က ရက်ရက်စက်စက် အသတ်ခံလိုက်ရပြီး ညီဖြစ်သူကပါ ပျောက်ကွယ်သွားတဲ့ ထန်ဝါ တစ်ယောက် တည်ကြည်လှတဲ့သူ့ရဲ့မျက်နှာနောက်ကွယ်မှာ ဖုံးကွယ်ထားတဲ့ အမှောင်ထုတရားတွေ ​ရှိနေပါတယ်။စုံထောက် ထန်ဝါကို လေးစားအားကျပြီး သူ့အတိုင်းအတုယူနေတဲ့ ထိပ်တန်းစုံထောက်မလေး အိုင်(Belle Kemisara Paladesh)...အိုင် နဲ့ ထန်ဝါ တို့ တွေ့ဆုံဖို့အကြောင်းဖန်လာပြီး အမှုတစ်ခုကို စုံစမ်းဖို့ ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတော့...ဖြေရှင်းလေလေ ပိုရှုပ်ထွေးလေလေဖြစ်လာပြီး လျှို့ဝှက်ချက်တွေကလည်း တစ်ခုပြီးတစ်ခုပေါ်လာတော့တယ်။ထန်ဝါ တစ်ယောက် ညီဖြစ်သူကိုပြန်ပြီးရှာတွေ့နိုင်ဦးမှာလားဆိုက်ကိုပါ့သ် တစ်ယောက်ရဲ့ကြောက်စရာကောင်းလှတဲ့ အမှောင်စိတ်ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ လူသတ်မှု တွေကို ရင်ခုန်စွာနဲ့ ကြည့်ရှုပြီး ကိုယ်တိုင်အဖြေထုတ်ရမယ့် Mystery Thriller ဇာတ်လမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်။တစ်ပတ်ကို နှစ်ပိုင်းနှုန်းနဲ့ တနင်္လာနေ့ နဲ့ အင်္ဂါနေ့များမှာ ...
TMDb: 399/10 27211 votes
Most Dangerous Game (2021) IMDb Rating (7.1)ဒီစီးရီးက ၂၀၂၀ ခုနှစ်က ထွက်လွှင့်ခဲ့ပြီး အပိုင်း (၁၅) ပိုင်းပါပေမယ့် ၇ မိနစ်စာ Action အတိုလေးတွေမို့၂၀၂၁ ခုနှစ်မှာ အကုန်လုံးပေါင်းပြီးတစ်ကားထဲအနေနဲ့ ထွက်ရှိလာတာပါ။၁၉၂၄ ခုနှစ်က ထွက်ရှိထားတဲ့ Richard Connell ရဲ့ The Most Dangerous GameShort Story လေးတွေကို အခြေခံလို့ ပြန်လည်ရိုက်ကူးထားတာပါ။မင်းသားကတော့ Thor မင်းသားရဲ့ ညီတော်မောင် Liam Hemsworth ဖြစ်ပါတယ်။ဇာတ်လမ်းကတော့...ငွေကြေးအခက်အခဲတွေ၊ မိသားစုအခက်အခဲတွေအပြင် မကြာခင်မှာ မီးဖွားတော့မယ့် မိန်းမအတွက် ငွေအရေးတကြီး လိုအပ်နေတာကြောင့်ဇာတ်လိုက် ဒေါ့ဂျ်တစ်ယောက် ကြံရာမရဖြစ်နေတဲ့ချိန်မှာ အခွင့်အရေးကြီးကြီးမားမားတစ်ခုနဲ့ချိတ်မိပါတယ်။ဒါကတော့ ၄၅ မိနစ်တိုင်းမှာ ဒေါ်လာ ၅၀၀၀၀ ဝင်မယ့် ဂိမ်းကစားနည်းတစ်ခုပါ။ဂိမ်းကစားနည်းက ရှင်းပါတယ်။ မြို့ထဲပတ်ပြေး အမဲလိုက်သမားတွေက လိုက်သတ်မယ့် Hunting Game တစ်မျိုးပါ။၄၅မိနစ်တိုင်း အသက်ရှင်နေတာနဲ့တင် ပိုက်ဆံရနေပြီ...အဲဒီမှာ ခေါင်းပူသွေးပူဖြစ်နေတဲ့ ...
TMDb: 7.7/10 48 votes
Bangkok Breaking(2021) Bangkok Breaking(2021)ထိုင်းဇာတ်လမ်းတွဲအညွှန်း********************************************အပိုင်းသစ်( ၁ မှ ၆ )ထိ စ/ဆုံးဒီဇာတ်ကားလေးကတော့ Netflix ကုမ္ပဏီက ကိုယ်တိုင် ရိုက်ကူးထုတ်လုပ်ထားပြီး လျို့ဝှက်ဆန်းကြယ်တဲ့ ထိုင်းအက်ရှင်ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကောင်းပါ.... အပိုင်းအရေအတွက်အားဖြင့် (၆) ပိုင်းတိတိ တစ်ပြိုင်တည်း ထွက်ထားပါတယ်....Casts:ဝမ်ချိုင် အဖြစ် Weir Sukollawat ကတ် အဖြစ် Aom Susharဇာတ်လမ်းအစမှာတော့ ထူးဆန်းပြီး ကြီးမားလွန်းတဲ့ ကားအက်ဆီးဒင့်တစ်ခုကနေ စခဲ့တာပါ.... နယ်ဘက်ကနေ ဘန်ကောက်ကို အလုပ်လာလုပ်ဖို့ တက်လာတဲ့ ဝမ်ချိုင်တစ်ယောက် ဘန်ကောက်ကို ရောက်ရောက်ချင်း အစ်ကိုဖြစ်သူ လာအကြိုကို ကားမှတ်တိုင်မှာ ‌စောင့်နေခဲ့ပါတော့တယ်... ကတ်ဆိုတဲ့ ကောင်မလေးကတော့ ဘန်ကောက်မှာ သတင်းထောက်လုပ်ငန်းဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပြုနေသူတစ်ယောက်ပေါ့ အဲ့ဒီအက်ဆီးဒင့်မဖြစ်ပွားမှီ ကတ်တစ်ယောက် သူ့ဦးလေးဖြစ်သူနဲ့ ကုမ္ပဏီစီအီးအိုအသစ် ကြိုဆိုပွဲအတွက် လောလောနဲ့ ကားကို အရှိန်ပြင်းစွာ မောင်းလာခဲ့ပါတယ် တစ်ဖက်မှာလည်း ဝမ်ချိုင့်အစ်ကို ပါလာတဲ့ ကားတစ်စီးဟာ အရှိန်ပြင်းစွာ မောင်းနှင်လာခဲ့ရာ အရှိန်မသတ်နိုင်တော့ပဲ ကြီးမားတဲ့ ကားအက်ဆီးဒင့်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ရပါတော့တယ် ဒါပေမယ့် ထူးခြားတာတစ်ခုက အဲ့ဒီအက်ဆီးဒင့်ဟာ အတွင်းကျကျ လျို့ဝှက်စွာနဲ့ လုပ်ကြံခံလိုက်ရခြင်းပါ.....တရားခံအစစ်ကို လုံးဝရှာမရပဲ ပျောက်ပျက်သွားပါတော့တယ်.. အဲ့နောက်တော့ ဒီလျှို့ဝှပ်ဆန်းကြယ်လှတဲ့တရားခံက ...
Nakaab(2021) Nakaab (2021)စိန်ရွှေကျောက်မျက်ရတနာကိုသာ အကဲခတ်ရလွယ်တော့ လူကဲခတ်ဖို့ကတော့ အင်မတန်ကို ခက်ခဲလှပါတယ်လူဆိုတာ ကိုယ်ချပြချင်တဲ့အရာကိုပဲ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ချပြတတ်တဲ့အမျိုးမဟုတ်လားလောကကြီးမှာ ကိုယ့်ရဲ့အခက်အခဲတွေ ဒုက္ခတွေကို ဟန်ဆောင်မျက်နှာဖုံးကိုယ်စီ တပ်ပြီး ဖုံးကွယ်ထားကြတဲ့လူတွေ လက်ညှိုးထိုးမလွဲပါပဲဒီလိုပါပဲ အောင်မြင်ချိန်မှာ အပေါ်ယံ ပြုံးပြနှုတ်ဆက်ပြီး ဖော်ရွေကြပေမဲ့ ကျရှုံးသွားတဲ့အချိန်မှာတော့ သူတို့ရဲ့အဲ့ဒီဟန်​ဆောင်မျက်နှာဖုံးတွေ ကွာကျပြီး အကျည်းတန်မှုတွေကို ထုတ်ဖော်ပြသလာပါလိမ့်မယ်ဒီဇာတ်လမ်းလေးမှာလည်း ဒီလိုပါပဲရဲမေတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ အဒီတီ အာမဲဟာ တစ်နေ့မှာတော့ နာမည်ကျော် မင်းသမီး ဗစ်ဟာဒက်တာရဲ့သေဆုံးမှုအကြောင်း စုံစမ်းဖို့ တာဝန်ကျလာခဲ့ပါတယ် .ဗစ်ဟာဒက်တာဆိုတာ ရုပ်ရည် အရည်အချင်းအဘက်ဘက်က ပြည့်စုံပြီး အားလုံးက စံထားနေရတဲ့ နာမည်ကျော်မင်းသမီးပါဒီလိုနဲ့ အဒီတီတစ်ယောက် အမှုစုံစမ်းနေရင်း မင်းသမီး ဗစ်ဟာရဲ့ ကျော်ကြားမှုမျက်နှာဖုံးနောက်ကွယ်က မထင်မှတ်ထားတဲ့ ကြောက်စရာ လျှို့ဝှက်ချက်ကို သိရှိလိုက်ရတဲ့အခါ....??တိုက်ပေါ်က ပြုတ်ကျသေဆုံးခဲ့တဲ့ ဗစ်ဟာရဲ့ သေဆုံးမှုကရော သေကြောင်းကြံစည်တာလား?? မဟုတ်ရင် လုပ်ကြံခံရတာလား??ရဲမေအဒီတီ သူ့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှု မိသားစု နောက်ဆုံး သူ့ကိုယ်သူပါ စတေးခံပြီး ...
Athena: Goddess of War(2010) Athena: Goddess of War(2010)ဇာတ်လမ်းတွဲအညွှန်း***********************************************အပိုင်းသစ်(၁ မှ ၂၀ထိ ) စ/ဆုံးဒီစီးရီးဟာ ကိုရီးယားစီးရီးသမိုင်းရဲ့ ဘက်ဂျက်အများဆုံးအသုံးနိုင်ဆုံးစာရင်းမှာ ဒုတိယချိတ်တယ်လို့ဆိုတယ်...နံပါတ်(၁)ကတော့ လီဗြောင်ဟွန်းတို့ရဲ့ IRIS (2009) ပေါ့....အခုစီးရီးဟာ IRIS(2009)ရဲ့ Spin-Off စီးရီးတစ်ခုဖြစ်တာမို့သူ့ချည်းသပ်သပ်ကြည့်လို့ရပါတယ်...ဒီစီးရီးက Castတွေက ထိပ်တန်းသရုပ်ဆောင်တွေချည်းဖြစ်သလိုဘက်ဂျက်အများကြီးသုံးထားလို့ ရိုက်ချက်တွေကလည်း အတော်ကြီးမိုက်ပါတယ်...Ongoing တွေစောင့်ရင်းနဲ့ အက်ရှင်စွန့်စားခန်းရသလေးခံစားပြီးတစ်နေ့တာရဲ့ ပေါင်းကူးတံတားလေးဖြစ်အောင် တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်...တစ်ရက်ကို (၂)ပိုင်းတင်ဆက်ပေးပါ့မယ်...အပိုင်း(၂၀)ရှိတာမို့ (၁၀)ရက်ဆိုပြတ်ပါတယ်....တကယ့်ကို ကြမ်းတမ်းရက်စက်လွန်းတဲ့ Son Hyulk ဆိုတဲ့လူ ခေါင်းဆောင်တဲ့ "အက်သီနာ" ဆိုသောအကြမ်းဖက်အဖွဲ့ဟာ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံနဲ့ ကမ္ဘာကို ခြိမ်းခြောက်လာခဲ့ပါတယ်။၎င်းတို့ရဲ့ ရက်စက်ယုတ်မာတဲ့ ပူးပေါင်းကြံစည်မှုကြီးကို တားဆီးရမဲ့တာဝန်ကတော့အမျိုးသားလုံခြုံရေးအေဂျင်စီ မှ အထူးအေးဂျင့် Lee Jung Woo ရဲ့ ခေါင်းပေါ်ကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဟာ တောင်ကိုရီးယားသမ္မတရဲ့ သမီးဖြစ်သူ Joo Soo Young ကို ပြန်ပေးစွဲထားပြီးတော့အီတလီမှာဖွက်ထားပါတယ်။ ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ သမ္မတရဲ့ သမီးကိုပြန်ရှာပြီးနေရပ်ကိုပြန်ခေါ်လာဖို့ Jung Woo ...
Athena: Goddess of War(2010)
Blue Birthday (2021) Blue Birthday အားလုံးအတွက် မွေးနေ့ဆိုတာကတော့ ပျော်ရွှင်စရာတွေ ၊ ဝမ်းသာစရာတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေစမြဲပါ...ဒါပေမယ့်...၁၈ နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မှာ ချစ်ရသူကို ဖွင့်ပြောဖို့ပြင်ဆင်ထားတဲ့ အိုဟာရင်း (Yeri) ဆိုတဲ့ အထက်တန်းကျောင်းသူလေးတစ်ယောက်သူမရဲ့မွေးနေ့မှာပဲ ချစ်ရတဲ့သူ ဂျီဆောဂျွန်း (Hongseok) က ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအဆုံးစီရင်သွားခဲ့ပါတယ်။အချိန်တွေကြာလာပေမယ့် အချစ်ဦးကိုအမြဲ တမ်းတရင်းနဲ့ တစ်နေ့မှာတော့ အချစ်ဦးသိမ်းထားခဲ့တဲ့ ဓာတ်ပုံတွေကိုတွေ့ရှိသွားပြီးလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်တာအချိန်ကိုပြန်ရောက်သွားခဲ့ပါတော့တယ်။အတိတ်ကိုပြန်ရောက်ရှိသွားတဲ့ အိုဟာရင်း တစ်ယောက် ဆောဂျွန်း ဘာကြောင့် အဆုံးစီရင်သွားရတယ်ဆိုတာကို ရှာဖွေရင်းအဆုံးစီရင်တာကို တားနိုင်မလား?Red Velvet အဖွဲ့ဝင် Yeri လေးနဲ့ PENTAGON အဖွဲ့ဝင် Hongseok တို့ရဲ့ fantasy romance ကားလေးကိုအပတ်စဥ်သောကြာနဲ့စနေနေ့တိုင်း Channel Myanmar မှာခံစားကြည့်ရှုလိုက်ပါဦး ။အညွှန်းကို HAW က ရေးသားပေးထားပြီးတော့ဘာသာပြန်ထားတာကတော့ HAW နဲ့ Amelia ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။Encoder - AugustEpisodes: 16 Aired: Jul 23, ...
The Road: The Tragedy of One(2021) The Road: The Tragedy of One(2021)ဇာတ်လမ်းတွဲအညွှန်း**************************************************အပိုင်းသစ်(၁ မှ ၁၂)ထိ စ/ဆုံးအချစ်ဇာတ်လမ်းတွေဆက်တိုက်ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာ တစ်ချို့ငြီးငွေ့နေတဲ့သူတွေအတွက်ဒီဇာတ်လမ်းတွဲဟာရွှေလို့ပြောလို့ရပါတယ်.. အဓိက သရုပ်ဆောင်တွေရော ဗီလိန်တွေကိုရော တကယ့်အထင်ကရတွေချည်းသုံးထားတဲ့ဒီစီးရီး အပိုင်း(၁)မှာတင်တော်တော် ကြမ်းတယ်ပြောရမှာပဲ..." Royal Hill '' ဆိုတာကတော့ ကိုရီးယားရဲ့ထိပ်တန်းအကျဆုံးလူကုံထံ ၁ ရာခိုင်နှုန်းမျှသာနေထိုင်နိုင်တဲ့အဆင့်အတန်းမြင့်အိမ်ရာတစ်ခုပေါ့.....စီးပွားရေးဘက်ပိုင်းမှာလည်း အရေးပါကြသလို အစိုးရပိုင်းနဲ့ ဉပဒေဘက်ပိုင်းမှာပါလွှမ်းမိုးရှိလေတော့ ဒီအိမ်ရာကလူတွေကို တော်ရုံမထိရဲကြဘူးပေါ့...အိမ်ပိုင်ရှင်တွေကလည်း လိုချင်တာဘာမဆိုရအောင်ဖန်တီးနိုင်ကြပြီးပြဿနာအားလုံးကို လက်ဖျောက်တစ်ချက်အတွင်းဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ ထက်မြက်ပါးနပ်တဲ့ မြေခွေးလိုလူတွေပါပဲ...အားလုံးလက်ရှောင်နေကြတဲ့ ဒီအိမ်ရာကလူတွေကို တစ်နေ့တော့ နာမည်ကြီးသတင်းဌါနလူတစ်ယောက်ကသူတို့နောက်ကွယ်ကလုပ်ရပ်အချို့က ဖော်ထုတ်ပြီးတစ်နိုင်ငံလုံးသိအောင် စကြေငြာလိုက်တယ်...ပြောရရင် တစ်ယောက်ထဲနဲ့ အကောင်ကြီးကြီးတွေကိုစိန်ခေါ်လိုက်တာပါပဲ....ရိုက်ချက်တွေလည်းအတော်လန်းပါတယ်...တမူထူးတဲ့မှုခင်းဇာတ်လမ်းတွဲဖြစ်လို့ ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာတော့အတော်စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲ...စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြရအောင်ဗျို့... Episodes-12Air Date-Aug 4, 2021 - Sep 9, 2021Aired On: Wednesday, ThursdayGenres: Thriller, Mystery, Crime, DramaTranslated by lwin Lwin Aung, Ichika Satoru,Hnin Wut Yi& Shoon Thu ...
The Road: The Tragedy of One(2021)
Into the Night Season 2(2021) Complete Into The Night (2021) ၂၀၂၀ခုနှစ်မှာ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းက အက်ရှင်သိပ္ပံကားကြိုက်သူများကို သိမ်းသွင်းခဲ့တဲ့ "Into The Night"ဟာ Season2ထွက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။Rating လည်းမြင့်ပြီး ဝက်ဝက်ကွဲ​အောင်မြင်ခဲ့တဲ့​ကား​လေးကို မသိသူမရှိ​လောက်​​ပေမယ့် အမြည်းဇာတ်ညွှန်း​လေး​တော့ ရေး​ပါရ​စေဗျာ။အကယ်၍များ ကျွန်​တော်တို့သက်ရှိ​သတ္တဝါတွေကို နေလုံးကြီးက လိုက်သတ်​နေရင် ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဗျ။ကျွန်​တော်တို့ အသက်ရှင်နိုင်ကြပါ့မလား။အသက်ရှင်တယ်ဆိုရင်​တောင် ရှင်သန်လှုပ်ရှားဖို့ဖြစ်နိုင်ပါ့မလား။ဘယ်လိုစား​သောက်​နေထိုင်ကြမှာလဲ။စဥ်းစားကြည့်​တော့လည်း မဖြစ်နိုင်သလိုပဲ​နော်။ဒါ​​ပေမယ့် ဒီကား​လေးက အ​ပေါ်ကမေးခွန်း​တွေကို အ​ခြေခံပြီး ရိုက်ကူးထားပါတယ်။နေ​ရောင်​ကွယ်တဲ့ မြေ​အောက်စခန်းထဲက မွန်းကြပ်မှု​တွေ အသက်ရှင်နိုင်ဖို့ ရုန်းကန်ရတာ​တွေကို ရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့ ကြည့်ရှုရမှာပါ။Season 1 မှာ​ လေယာဥ်တစ်စီးနဲ့ ကမ္ဘာပတ်​ပြေးခဲ့ရတဲ့ လူတစ်ခုဟာ အခု season2မှာ​တော့ မြေ​အောက်စစ်တပ်စခန်းတစ်ခုမှာ နေရာကျသွားကြပါပြီ။ဒါ​ပေမဲ့ အခက်အခဲ​တွေ​တော့ရှိ​​နေပါ​သေးတယ်။ သို​​လှောင်ထားတဲ့ ရိက္ခာများပျက်စီးမှု​​ကြောင့် ငတ်မွတ်​ခေါင်းပါးမှု​ဘေးနဲ့ကြုံ​တွေ့နေရပါတယ်။ရွေးချယ်စရာရှိတာက မြေ​​အောက်မှာ အစာပြတ်လတ်ပြီး​​သေမလား မြေပြင်​ပေါ်တက်ပြီး စွန့်စားကြမလားဆိုတာပါပဲ။ဒါ​ကြောင့်သူတို့ဟာ နော်​ဝေနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ မျိုး​စေ့တွေကို လေယာဥ်နဲ့သွားယူဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတယ်။အဲ့​တော့နေ​လုံးကြီးရဲ့ အန္တရာယ်ကို​ရှောင်ကွင်းပြီး ...
Into the Night Season 2(2021) Complete
Into the Night (2020) Season 1[COMPLETE] နက်ဖလစ်ရဲ့ စီးရီးအသစ်လေး တစ်ခု တင်ပေးထားပါပြီ။ ဒီကားကတော့ Survival အမျိုးအစားပါပဲ။ကပ်ဘေးတစ်ခုကနေ အသက်ရှင်အောင် ကြိုးစားရတာမျိုးပေါ့။ ကပ်ဘေးကတော့ နည်းနည်းဆန်းပါတယ်။တစ်ကမ္ဘာလုံးက လူတွေအားလုံး နေရောင်နဲ့ ထိတာနဲ့ သေဆုံးကုန်ပါတယ်။အိမ်တွေထဲမှာနေတာတောင် မရပါဘူး။ဒီတော့ အဲဒီကပ်ဘေးစတင်ချိန်မှာ ကမ္ဘာကြီးရဲ့ နေမထွက်သေးတဲ့နိုင်ငံကလူတွေလည်း အသည်းအသန် ထွက်ပြေးဖို့ပုန်းခိုဖို့တွေလုပ်ပြီး ကမ္ဘာပျက်ကိန်းကြီး စလာပါတော့တယ်။ဒီထဲက အဓိက ဇာတ်ကောင်တွေကတော့ လေယာဉ်တစ်စီးထဲ စီးမိတဲ့ သူတွေဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာက နေကိုပတ်နေတဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကို တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့် ပတ်ပြေးဖို့ ကြိုးစားကြပါတော့တယ်။ဇာတ်လမ်းနာမည် ဖြစ်တဲ့ Into the night ဆိုတာ ဒါပါပဲ။ညဆီကို တိုးမဝင်နိုင်ဘဲ ကျန်ခဲ့တဲ့ လူအားလုံး သေရပါလိမ့်မယ်။ဒီကပ်ဆိုးကနေ ဘယ်လိုအလွတ်ရုန်းကြပြီးဘယ်လို အဖြေရှာကြမလဲဆိုတာ ကြည့်ရမှာပါပဲ။၆ ပိုင်းပဲ ရှိတာမို့ ဆက်တိုက်စဆုံး တင်ပေးသွားပါ့မယ်။(ဘာသာပြန်တင်ဆက်ထားသူကတော့ Littleneo ပဲ ဖြစ်ပါတယ်)Quality – 720p NF WEB-DLDuration – 40min (@Episode)Subtitle ...
Into the Night (2020) Season 1[COMPLETE]
Sherlock (Season 1-4) Complete IMDb Rating (9.1/10) / Rotten Tomatoes (78%)BBC One ရုပ်သံလိုင်းကနေ အလွန်ကပ်စီးနည်းစွာ ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ ရှားလော့ဟုမ်းဇာတ်လမ်းတွဲပါပဲ...Season တစ်ခုထွက်ဖို့ ၂ နှစ်ကြာသလို ထွက်လာရင်လဲ အပိုင်း(၃)ပိုင်းပဲပါတတ်ပါတယ်...အခုထိတော့ Season(4) ထိထွက်ရှိထားပြီး Special Episode နဲ့ဆို စုစုပေါင်းအပိုင်း (၁၃) ပိုင်းထွက်ရှိထားပြီဖြစ်ပါတယ်။ရှားလော့ဟုမ်းအဖြစ် မင်းသား Benedict Cumberbatch နဲ့ ဒေါက်တာ Watson အဖြစ် မင်းသားကြီး Martin Freeman တို့မှပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။Benedict Cumberbatch ရဲ့ သရုပ်ဆောင်ချက်တွေက ခေတ်သစ်ရှားလော့ဟုမ်းအဖြစ် သူ့ကိုနာမည်ကြီးစေခဲ့သလို ဒီစီးရီးဟာလဲ ကြည့်ရှုသူတွေ တစ်ခဲနက်အားပေးကြတဲ့ ရှားလော့စီးရီးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ရှားလော့ဟုမ်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေ Sherlock Series နဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုတော့ အောက်မှာမြည်းစမ်းလို့ရပါတယ်။+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Most portrayed literary human character in film and television history. (ရုပ်ရှင်နှင့် ရုပ်သံ သမိုင်းတွင် ...
TMDb: 9.1/10 3133 votes
Sherlock (Season 1-4) Complete
Elite (Complete) စပိန်စကားပြော ဒီ Netflix စီးရီးလေးကတော့ ၂၀၁၈ ကစတင်ထွက်ရှိခဲ့ပြီး အခုဆို Season (4) ထိ ထွက်ရှိထားသလို နောက်စီစင်တွေလဲ ထပ်မံထွက်ရှိဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစီးရီးက ထူးခြားတဲ့တင်ဆက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး လူငယ်တွေကြားက နက်နဲတဲ့ Relationshipအကြောင်းတွေကို ရဲရဲတင်းတင်း ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းတင်ဆက်ထားတာပါ။အသက် ၁၈ နှစ်တောင် မပြည့်ကြသေးတဲ့ လူငယ်တွေ ကျောင်းမှာပညာရှာရင်းနဲ့ ပွဲကြမ်းချက်ကလဲ လက်လန်ပါတယ်...Sex ကိစ္စမှာဆိုလဲ Straight , BL , Lesbian , Cuckold ,2in 1 , Incest စသည်ဖြင့်အောတိုက်ရလောက်အောင် စုံစီနဖာပဲ အရပ်ကတို့ရေ... ကဲ..ဒီစီးရီးနာမည်လေးကတော့ Elite အထက်တန်းလွှာဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ပေါ့.. Las Encinas ဆိုတဲ့ ကျောင်းတော်ကြီးဟာ စပိန်နိုင်ငံပြဲပြဲစင်မှာ ကြေးရတက်လူတန်းစား တွေ လူကုန်ထံသားသမီးတွေပဲ တက်နိုင်တဲ့ အထက်တန်းစားကျောင်းတော်ကြီးပေါ့ ဒါပေမယ့် ထူးထူးဆန်းဆန်းပဲ ဆင်ခြေဖုံးရပ်ကွက်မှာနေတဲ့ သာမန်လူတန်းစားအသိုင်းဝိုင်းက လူငယ်လေးသုံးယောက် Las Encinas ကျောင်းတော်ကြီးမှာတက်ရောက်ဖို့ ကံအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လာပါတယ် မထင်မှတ်ထားတဲ့ ငလျင်လှုတ်ခတ်မှုကြောင့် ထိုလူငယ်လေးသုံးယောက်တက်နေတဲ့ အညတရကျောင်းလေးပြိုကျမှုဖြစ်ပြီးနောက်မှာမြို့နယ်ကောင်စီက ခရစ်ရှန် ...
Illusion of Love (or) Maya Sanaeha (2021) I Fine Thank You,Love You နဲ့ ATM Error ဇာတ်ကားတွေထဲက ကျွန်တော်တို့ အသည်းစွဲမင်းသမီးလေး Ice Preechaya ရဲ့ စီးရီးလေးပါ။ဒီစီးရီးကို ထိုင်းနိုင်ငံ Channel3 ရုပ်သံလိုင်းမှာ ပြသခဲ့ပြီး ၂၀၂၁ ဇူလိုင်လထဲမှာ အပြီးထိ ထွက်ရှိထားပါတယ်။မင်းသားကတော့ Fabulous 30 ဇာတ်ကားထဲက ရုပ်ချောချော ဘော်ဒီတောင့်တောင့်နဲ့ Ken Phupoom ဖြစ်ပါတယ်။Channel7 မှာ ပြနေကျ ထိုင်းဇာတ်ကားတွေထဲက နာမည်ကြီးဗီလိန်တွေ ဇာတ်ရံတွေအပြင် အရံမင်းသားမင်းသမီး အတွဲတွေလဲ ပါပါသေးတယ်...။ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းလေးကတော့....မွန်နဲ့ခီတို့ဟာ အဆင်မပြေတဲ့ အိမ်ထောင်ရေးကို ခရီးဆက်နေကြသူတွေပါ...ပြည့်စုံကြွယ်ဝတဲ့ နှစ်ဖက်မိဘတွေကလဲ ရန်စောင်နေကြပြီး မတည့်ကြတာမို့ သူတို့နှစ်ဦးကြား ပိုလို့ ပြသနာဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်...ဒီကြားထဲ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် အထင်လွှဲမှားစရာ ဒုတိယလူတွေ ပေါ်ပေါက်လာတဲ့အခါမှာ...သိပ်ချစ်တဲ့ချစ်သူနှစ်ဦးရဲ့ အိမ်ထောင်ရေးဟာ စားပွဲထောင့်စွန်းက ကြွေခွက်လေးလို လေတိုက်တာနဲ့ ကျကွဲဖို့ဖြစ်လာပါတော့တယ်...ဖြစ်ချင်တော့ ခီတစ်ယောက် မတော်တဆမှုဖြစ်ပြီး ဝိဉာည်နဲ့ခန္ဓာကိုယ် ...
Illusion of Love (or) Maya Sanaeha (2021)
Voice 4: Judgment Hour (2021) Voice 4: Judgment Hour (2021)ဇာတ်လမ်းတွဲအညွှန်း****************************************အပိုင်းသစ်(၁ မှ ၁၄ ထိ)စ/ဆုံး Season4မှာတော့ 112 call center စင်တာမှူးကြီး K‌ang Kwon Jo ဟာ Season 1,2,3မှာ ရခဲ့တဲ့ စိတ်ဒဏ်ရာတွေကြောင့်trauma ရသွားကာ psychopath တစ်ယောက်အဖြစ် ပြောင်းလဲသွားပြီး လူတွေကို လိုက်သတ်နေတာလား ...ဒါမှမဟုတ် အမြွှာလို ရုပ်ချင်းတူတဲ့ သူတစ်ယောက်ကများ စင်တာမှူးလိုဟန်ဆောင်ပြီး လိုက်သတ်နေတာလားဆိုတာကိုဖော်ထုတ်ရမှာပါ။မင်းသားနေရာ‌မှာတော့ LA ကပြောင်းလာတဲ့ စုံထောက် Derek Jo (ဂျွန်စော)ပါ၀င်လာပြီးတော့ကွင်းဆက်လူသတ်သမားအမှုနဲ့ အမှုများစွာကို ထပ်မံဖော်ထုတ်ဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။အညွှန်းအများကြီးမရေးသင့်တဲ့စီးရီးမို့ ကိုယ်တိုင်ပဲ ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစွာ စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြပါကုန်...Duration – 60Min (@Episode)Subtitle – Myanmar HardsubFormat – Mp4Genres- Crime,Adventure,Thriller, DramaTranslated by Ei ...
TMDb: 6.5/10 29 votes
Kingdom (2019) Season 1 [COMPLETE] အခုလောလောလတ်လတ် ၂၀၁၉ ဇန်နဝါရီ ၂၅ မှာမှ အသစ်ထွက်လာတဲ့ ကိုရီးယား အက်ရှင်စီးရီးလေးတစ်ခုနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။အွန်လိုင်းကောမစ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ "The Kingdom of the Gods" ကို အခြေခံပြီး ရိုက်ကူးထားတာပါ။ထုတ်လုပ်သူကတော့ အခုနောက်ပိုင်းမှာ ဇာတ်လမ်းတွဲကောင်းများစွာကို ထုတ်လွှင့်နေတဲ့ Netflix ကပါပဲ။Netflix ကလွှင့်တဲ့ ဒုတိယမြောက် ကိုရီးယား ဇာတ်လမ်းတွဲဖြစ်ပြီး ပထမ Season အနေနဲ့ အပိုင်းခြောက်ပိုင်းပါရှိပါတယ်။အဓိကဇာတ်ဆောင်ဖြစ်တဲ့ အိမ်ရှေ့စံ Lee Chang နေရာမှာ သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ မင်းသား Ju Ji-Hoon ကိုတော့ မသိတဲ့သူမရှိလောက်ဘူးထင်ပါတယ်။ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ ဂျိုဆောင်ခေတ်မှာ အိမ်ရှေ့စံမင်းသားက တိုင်းပြည်အတွင်းမှာ ထူးဆန်းတဲ့ ကပ်ရောဂါဆိုး ကျရောက်နေတာကိုစုံစမ်းရင်းအမှန်တကယ်တော့ အဲဒီကပ်ရောဂါဆိုးက လူတွေကို ဇွန်ဘီတွေဖြစ်သွားနိုင်စေတယ်ဆိုတာ သိလာရပါတယ်။သူအဲဒီကပ်ရောဂါဆိုးကနေ သူ့ရဲ့နိုင်ငံကို ကယ်တင်နိုင်ပါမလား။အိမ်ရှေ့စံဖြစ်တဲ့ သူ့ကို ထီးနန်းမရအောင် တားဆီး တိုက်ခိုက်နေတဲ့သူတွေကိုရော ကာကွယ်နိုင်ပါမလားဆိုတာကို အက်ရှင် ကြမ်းကြမ်းလေးနဲ့ပြပေးထားပါတယ်။(ဘာသာပြန်တင်ဆက်ထားသူများကတော့ Thura ...
Voice 3(2019) Voice 3(2019) အညွှန်း********************အပိုင်းသစ်( ၁ မှ ၁၆) ထိ စ/ဆုံးဒီတစ်ခေါက် Season3မှာတော့ Season2တုန်းက မပြီးပြတ်သေးတဲ့အမှုကို ဆက်လက် အဖြေရှာကြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ အကြားအာရုံရှိပေမယ့် ဦးနှောက်အာရုံကြောဝေဒနာတစ်မျိုး ခံစားနေရတဲ့ စင်တာမှူး Kang Gwon Ju ၊နားလည်ရခက်တဲ့ အဖွဲ့မှူး Do Kang Woo နဲ့ Golden Time ကအဖွဲ့သားတို့ဟာ 112 call center ကိုတိုင်ကြားလာတဲ့ ရာဇ၀တ်မှုခင်းတွေကို တက်ညီလက်ညီနဲ့ လိုက်လံဖော်ထုတ်ဖြေရှင်းပေးသွားကြမှာပါ။Season3မှာ နောက်ထပ်ပါ၀င်လာတဲ့ အမှုတစ်ခုကတော့ Doctor Fabre ဆိုတဲ့ Dark Web တစ်ခုရဲ့ အဓိကကြိုးကိုင်တဲ့သူကိုရှာဖွေရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအဓိကကြိုးကိုင်သူဟာ Do Kang Woo ရဲ့ အတိတ်ကိုဘာလို့အဲ့‌လောက်ထိသိနေရတာလဲ ဘာလို့အမြဲတမ်း ...